Malta waxay sheeganeysaa Herd Immunity, waxay u furtay dalxiis martida caalamiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabhada Malta » Malta waxay sheeganeysaa Herd Immunity, waxay u furtay dalxiis martida caalamiga ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Faallo • Wararka Dowladda • Wararka Jabhada Malta • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dhiiga Malta ee taajka
Difaaca Aruurku wuxuu noqon karaa eray sixir cusub marka ay timaado in dib loo furo warshadaha safarka iyo dalxiiska. Wasaaradda dalxiiska ee Maltas waxay hadda sheeganeysaa xasaanadda xoolaha, maxay tahay tallaabo geesinimo leh - laakiin ma ammaan iyo run baa in la yiraahdo?
Malta waa wadan xubin ka ah Midowga Yurub iyo jasiirad ku taal badda Mediterranean. Dalxiisku waa midka ugu muhiimsan waaxda ganacsiga Malta.
In kasta oo inta badan Yurub ay leedahay heerar tallaal oo gaabis ah, xirxirid, iyo xaddidaadyo, inbadan waxay raadinayaan meelo ka tirsan Midowga Yurub halkaasoo fasax ka yareyn karo xamaasad iyo madadaalo badan. Malta waxay dooneysaa inay noqoto waddankan waxayna leedahay eray sixir ah: Dhowrsanaanta Xoolaha Waa La Gaadhay
Lambarada tallaalka Malta way fiican yihiin laakiin ma ahan kuwa ugu sarreeya adduunka. Ma jiro waddan adduunka ka tirsan oo sheegta xasaanadda xoolaha. Malta waa tan ugu horeysa halkan waxaana laga fili karaa gobolada kale ee lambarada talaalka la mid ah ama kuwa ka sareeya ay koobi ka dhigan doonaan ereyga 'Herd Immunity'.
Sheegashada Malta ee xasaanadda xoolaha ma saxbaa mise waa masuuliyad darro?
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed lagu faafiyay Jarmalka, Malta waxay noqotay dalkii ugu horreeyay ee Midowga Yurub ee ku guuleysta xasaanadda xoolaha ee Cudurka faafa ee COVID-19. Laba toddobaad ka hor, jasiiradaha badda Mediterranean-ka ayaa noqday waddankii ugu horreeyay ee ka tirsan Midowga Yurub ee billaaba tallaalka dadka da'doodu ka weyn tahay 16-kii. Maalintii Isniinta ee Whit, 24-kii Maajo, ayaa la helay markii ugu horreysay ee tallaal laga helo in ka badan 70 boqolkiiba kuwa la tallaalay. Boqolkiiba 42 dadweynaha ayaa horeyba ugu raaxeysanaya kahortagga tallaalka kadib qiyaasta labaad.
Sida laga soo xigtay Iskuulka John Hopkins Bloomberg, Difaaca Dhirta waxaa lagu qeexi karaa marka dadka intiisa badani ay ka caabudaan cudur faafa, tani waxay siisaa difaac aan toos ahayn — ama difaac dadweyne (oo sidoo kale loo yaqaan difaaca xoolaha ama ilaalinta lo'da) - kuwa aan ka difaaci karin cudurka.